Sheekada jaajuusaddii reer Masar Hibo Saliim ee sirdoonka Israa’iil dalkeeda u adeegsadeen qeybta 3aad | XORRIYA NEWS
Sheekada jaajuusaddii reer Masar Hibo Saliim ee sirdoonka Israa’iil dalkeeda u adeegsadeen qeybta 3aad
DHACDADA LABAAD; BANII NADIIR.
Banii Nadiir waxay ahaayeen qabiilkii labaad ee balanta uga baxay Nabiga scw waxayna ahaayeen kuwa dhagar badan misna khiyaano badan heer dhagartooda ay gaarsiisay iney shirqool u dhigaan Nabiga scw kaasoo ay ku doonayaan iney ku dilaan.
Waxaa dhacday In nin saxaabada kamid ah uu si kama’ ah u dilay labo nin oo reer Banii Kilaab ah wuxuuna nabiga scw go’aansaday inuu diyadooda dhiibo.
Heshiiska nabiga scw iyo yahuuda dhex yaalay waxaa qodobadiisa kamid ahaa in diyooyinka ama magta la iska caawiyo sidaas darteed ayuu nabiga sc woo ay la socdaan koox asxaabtiisa kamid ayaa u tageen reer Banii Nadiir si uu uga soo qaado magta labadii nin ee reer bani Kilaab kuwaasoo uu dilay Camar bin Umayya Ad-damri.
Nabiga scw markuu u yimid ayay dhaheen halkaan noo fadhiiso intaan howshaada kaaga dhameyneyno, kadibna nabiga scw ayaa fariistay mid kamid ah guryahooda agtiisa gaar ahaan dhanka darbiga guriga waxaana la fadhiyay abuu bakar Cumar iyo koox asxaabta kamid ah.
Yahuudii ayaa markaas isku timid sidii caadada u aheydna dhagartoodii iyo shirqoolkoodii ayay gudo galeen ayagoona sheydaan u qurxiyay iney Nabiga scw dilaan. Markaas ayay dhaheen yaa dhagaxaan qaadaayo oo guriga uu agfadhiyo korkiisa inta fuuliyo madaxa uga soo tuuraayo si uu u dhinto?
Waxaa istaagay koodii ugu xumaa wuxuuna ahaa Yahuud lagu magacaabi jiray Camar bin Juxaash asigoona yiri; “anigaa yeelaayo sidaas”. Hase yeeshee waxaa jiray mid kamid ah Yahuuda oo la oran jiray Salaam Bin Mushkim isla markaasna shirqoolkaas kasoo horjeeday wuxuuna Yahuudii dhagarta maleegaysay ku yiri; “sidaan ha yeelina wlhi waa loosoo warami doonaa oo wuu ogaan doonaa waxaad ku hamideen waxaadna burineysaan balankii aan la galnay ee na dhex yaalay”.
Salaam Bin Mushkim wuxuu ogaa inuu Nabi yahay oo loosoo waxyoonayo sidaas darteed ayuu uga digay in fal noocaan ah ku kacaan hase yeeshee wey ka diideen iney taladiisa qaataan ayagoona go’aansaday iney shirqoolkooda hirgalintiisa sii wataan.
Yahuudii markii ay shirqoolkooda ku adkeysteen waxaa dag-dag usoo dagtay Jabrii Caleyhi Salaam asigoo dhambaal ka sido rabiga caalamiinta wuxuuna Nabiga scw u sheegay shirqoolka ay Yahuuda damacsanyihiin iyo waxay ku hamiyeen.
Nabiga markii uu kawarhelay shirqoolkii yahuuda ayuu si dagdag ah uga kacay goobtii asigoona u jiheystay dhankii Madiina waxaana sidoo kale ka daba kacay asxaabtiisa. Asxaabtii ayaana nabiga scw ku yiri; “rasuul Allow waxaad kacday anagoon ku dareemin waxna noo sheegin” markaas ayuu nabiga scw u sheegay dhagartii ay Yahuuda maleegeen iyo waxay ku hamiyeen.
Kadibna Nabiga scw wuxuu Yahuudii u diray Maxamed bin Musalama asigoona ugu dhiibay dhambaal uu ku amraayo in mudo 10 maalmood ah uga baxaan magaalada Madiina oo qofkii iyaga ka tirsan oo 10 maalin kadib magaalada lagu arko qoorta laga jari doono.
Yahuudii oo cabsi dareentay ayaa bilaabay iney isku diyaariyaan sidii ay magaalada Madiina uga bixi lahaayeen hase yeeshee munaafaqiintii ayaa balan been ah u yaboohay ayadoo madaxii munaafaqiinta Cabdullaahi bin Ubayyi bin Salool uu dhambaal u diray Yahuuda kaasoo uu ku leeyahay; “ha bixina oo guryihiina jooga Maxamedna la dagaalama waayo anagaa garab idiin siineyno oo hadii aad dagaal gashaan waan idinla dagaal galeynaa hadii la idiin saarana waa idinla baxeynaa”.
Markii Yahuuda ay taageeradaas ka heleen munaafaqiintii ayay joojiyeen qorshihii ay ku bixi rabeen waxayna nabiga scw u usoo direen dhambaal ay ku leeyihiin; anaga guryaheena idiin kagama bixi doono ee waxaad doontaan sameeya”.
Yahuuda Reer Banii Nadiir waxay ku tashanayeen munaafaqiintii iyo qabiilada ay gaashaan buurta ahaayeen sida yahuuda Reer Banii Qureyda iyo qabaa’iladii carbeed ee badowda reer Qadfaan.
Muslimiinta waxay waqtigaas ku sugnaayeen marxalad adag waayo dagaalkii Uxud oo ay ku shahiideen 70 saxaabi waxaa laga joogaa mudo yar sidoo kale waxaa Uxud kadib muslimiinta laga dilay misna ka shadiiday 80 saxaabi oo 10 kamid ah ku shahiideen dhacdadii Al-Rajiic halka 70ka kalana ku shahiideen dhibaatadii Ceel Macuun raga muslimiinta ka shahiidayna waxay u badnaayeen saxaabada kuwooda ugu fadliga badnaa ayadoona sidoo kale wada ahaayeen rag quraanka akhriya misna kor ka xifdisan.
Sidaas owgeed dhacdo kale oo dhiig ku daato ama guuldaro kale oo soo gaartaa waxay la micno aheyd in ciidanka Madiina dharbaaxo milatari la kulmaan hadana waxay maanka ku haayeen hadii aysan Yahuuda iska edbin qabaa’ilada badwoda carbeed uu damac kasoo gali doono qabsashada Madiina kahor intaan la gaarin cadowgoodii weynaa ee Quresyh.
Sidaas owgeed waxay go’aansadeen in kooxdaan shirqool iney nabiga ku dilaan damacday la edbiyo iyaga iyo kuwii garab siiyaba awoodoodana dib usoo ceshta.
Nabiga scw markii uu soo gaaray dhambaalkii madaxii yahuuda Banii Nadiir oo la oran jiray Xuyay Bin Akhdab ayuu takbiirsaday waxaana takbiirtii la qaaday asxaabta kadibna dagaal ayay isku diyaariyeen ama guul ama geeri.
Nabiga ayaa magaalada uga tagay Cabdulaahi bin ibnu Maktuum waxaana calanka u siday Cali bin abii daalib kadibna waxay dul yimaadeen yahuudii oo mar hore qalcadahooda dhufeys ka dhigteen waxayna muslimiinta saareen go’doon daran.
Yahuudii ayaa markaas si ay iska caabin u sameeyaan bilaabeen iney qalcadaha dushooda falaaro iyo warmo kasoo tuuraan waxaana siweyn yahuuda u caawinaayay beerahooda iyo geedaha timirta.
Nabiga ayaa amar ku bixiyay in dhamaan geedahaas la jaro sidoo kalana la gubo kadibna si daran ayaa loo go’doomiyay.
Yahuudii markii si daran loo go’doomiyay cid u gargaarta waa la waayay oo munaafaqiintii balantii wey uga baxeen reer Qadfaan iyo reer banii Qureyda oo ay gaashaanbuur ahaayeena cid usoo gurmato waa la waayay waxayna cidlo ku noqdeen go’doonkii lasaaray ayagoona taladii sheydaanka abaalkeeda helay.
Go’doonkii wuxuu socday kaliya 6 maalmood waxaa kaloo la sheegaa isocday mudo 15 maalmood si kastoo ay ahaataba markii xaalka ka xumaaday cid u gargaartana ay waayeen ayuu alle qalbiyadooda argagax ku riday markaas ayay nabiga scw fariin usoo direen ay ku leeyihiin waan ka baxeynaa magaalada Madiina.
Markaas ayuu nabiga ku amray iney maxastooda iyo wixii ay owrtooda u qaadi karto la baxaan markii laga reebo hubkooda.
Kadib ayay 700 oo rati ku guureen waxayna badankooda iyo raggii ugu caansanaa sida XuyayBin Akhdab iyo Salaam bin Abii Xuqeyq u guureen magaalada Kheybar halka koox kalana u qaxday dhankaas iyo sham balse waxaa jireen labo kamid ah oo soo islaamtay waxayna kala ahaayeen Yaamiin bin Camar iyo Abuu Sacad bin Wahab maxastooda iyo maalkoodana wey badbaadsadeen oo magaalada ayay baaqi kusii ahaadeen.
DHACDADA SADAXAAD; REER BANII QUREYDA.
La soco qeybta 4aad.